10 Dzidzo dzeMicrosoft dzichachinja nzira yaunofunga | ITS
"Nguva dzose tinotongwa nemashamwari edu mumabhizimisi edu, uye ndinofunga kuti [Microsoft Certification] inzira inotyisa yekuratidza kutendeseka kune unyanzvi hwakanaka muhutano hwako, uye kuratidza kune vamwe vanhu kuti une zvatinoda kutora danho rinodiwa. Zvimwe zveMicrosoft Training & Certification zvinotevera:
Windows Azure Solutions ne Microsoft Visual Studio 2010
Networking ne Microsoft Windows server 2012
Microsoft Windows Server Chengetedzo Dzemitemo
Microsoft Office 365 Kuparadzanisa
Microsoft Exchange Server Mutungamiri neKachengeteka
Dzidzo yeMicrosoft Course & Certification
1. Windows® Azure ™ Solutions ne Microsoft® Visual Studio® 2010
2. Kutanga neVBA muExcel 2010
Sei Uchishandisa VBA muExcel 2010?
3. Windows Server 2016 Kudzidzisa: Networking
4. Windows Server Administration Zvigadziriswa: MTA Test 98-365
7. Microsoft Office 365 Kuparadzanisa
9. Microsoft Exchange Server Mutungamiri neKachengeteka
10. Microsoft Exchange Server 2013 Kurovedza
Dzidzo iyi yeMicrosoft & Certification ndiyo prolog yekugovera computing uye kunyanya yeMicrosoft yakazaruka gore inopa Windows Azure. Windows Azure yakaratidzwa neMicrosoft semusana wekushanda we "gore". Mukirasi ino, iwe unotsvaga gwaro rekushanda iri gore uye ona nzira yekunyora, kutumira uye screen.NET zvidzidzo muAzure.
Iyi kirasi yakagadzirirwa vashandisi veNET neWeb application application inosangana iyo iri kutsvaga kukura maitiro matsva kana kutakura zvidzidzo zviripo kune Windows Azure
Ngwarira computing yakaparadzirwa mumatunhu ayo akasiyana uye kuti Windows Azure inopindirana sei mune zvakaparadzirwa computing space.
Cherechedza kuti sei shamwari dzinofanira kushanda mumiririri mugore reAzure.
Shandisai engineering yeAzure.
Tsvaga muAzure SDK uye nzvimbo yekuvandudza (Compute uye Storage Emulators).
Ona nzira yekuumba mapurogiramu eAzure uye kuti inoshanduka sei kubva pane "inowanzo" .NET yekufambira mberi kwekushanda.
Nyora uye tumira ASP.NET Web application (Webhuro) kuAzure.
Ratidza kuti ungaita sei uye utaure nheyo dzekushongedza maitiro (Worker Role) muAzure.
Tsvaga Zuva Rokuchengetedza ruzivo rwekuchengetedza tafura, mutsara uye blob kuunganidza.
Ongorora SQL Azure, database yevanhu mumakore.
Fungisisa kuti SQL Azure inopesana sei neAzure Storage.
Inoisa Visual Basic ye Applications (VBA) muExcel 2010 kumugadziri weEexcel uyo asati ava injinjiniyuta. Ichi chinyorwa chinosanganisira mufananidzo weVBA dialect, mirayiridzo inonyanya kushandisa nzira yekuenda kuVBA muExcel 2010, pfungwa nekunotsanangurwa kwendima yepinduriro yechokwadi cheExcel VBA chirongwa chekuita, uye mazano pamusoro pekugadzirisa nekuongorora. Sei Uchishandisa VBA muExcel 2010?
Microsoft Excel 2010 inyanzvi inoshamisa inokwanisa kushandisa kushandisa kuraira, kuparadzanisa, uye kuratidza ruzivo. Mune dzimwe nguva zvisinei, pasinei nehupfumi hwezvinhu zvakakosha muEexcel (UI), iwe ungada kuwana nzira inoda kuedza kuti uite basa risingaitiki, rinopera, kana kutamba chimwe chinhu icho UI hachiiti ita sekutarisa. Nenguva isipi, mahofisi eHofisi akadai seEexcel ane Visual Basic for Applications (VBA), chirongwa chekugadzirisa chinokupa simba rekuwedzera zviyero izvi.
VBA inoshanda nekushanda macros, nzira yakarongedzwa zvakanaka yakanyorwa muVasual Basic. Kuenzanisa nzira yekuronga kunogona kuonekwa sekutyisidzira, asi nekusimbiswa uye nemifananidzo shomanana, somuenzaniso, izvo zviri munyaya ino, vatengi vakawanda vanocherechedza kuti kuchinja kunyange chidimbu chemufananidzo weVBA kunoita kuti basa ravo rirege kukumbira uye rinovapa kukwanisa kuita kuti zvinhu zviitike muHofisi izvo zvavasina kutenda zvaifunga. Paunenge washandura imwe VBA, inosvika kuva nyore nyore kutora mhepo yakawanda-zvekare zviitiko zvinofungidzirwa pano hazvina maturo.
Nokudururwa kwenguva refu iyo inonyanyozivikanwa yakakurumbira yekushandisa VBA muExcel ndeyekuita robotize zvinowanzoita mabasa. Semuenzaniso, funga kuti une mabhuku gumi nemaviri ekugadzirira, rimwe nerimwe rine mabhuku gumi nemaviri, uye rimwe nerimwe razvo rinoda zvishoma kuchinjwa kwariri. Kufambira mberi kunogona kunge kwakananga sekushandisa sarudzo itsva kune imwe nzvimbo yakagadzikana yemasero kana sepfungwa dzinenge dzichifamba sekutora gander pane zvimwe zvounhu zvezvinyorwa pamashizha ose, kutora yakanakisisa yemagirati kuratidzira ruzivo nehuhu hunhu, uye shure kuti kugadzira uye kuronga mufananidzo nenzira yakafanana.
Chero zvazvingava, iwe ungangodaro haufaniri kudikanwa kutamba zvinhu izvozvi mumuviri, chero zvingave zvisingatauri nekupfuura. Pane kudaro, iwe unogona kufungidzira zvinyorwa kuburikidza uchishandisa VBA kunyora zvisina kufanira mazano kune Excel kutora.
VBA haisi yezvakanyorwa zvekare chete. Iwe unogonawo kushandisa VBA kuti uise mikana mitsva neExcel (somuenzaniso, unogona kukura maverengi matsva kuti uongorore ruzivo rwako, zvino shandisa mano ekutsanangurira mu Excel kuratidza zvawanikwa), uye kuita zvinyorwa zvinoronga Excel nedzimwe mahofisi eHofisi, somuenzaniso, Microsoft Access 2010. Chokwadi chinotaurirwa, chemahofisi ose eHofisi, Excel ndiyo inonyanya kushandiswa sechinhu chinotora mushure mekugadziriswa kwese. Kunyange zvakadaro zvishamiso zvose zvinosanganisira zvinyorwa uye kuchengetedza mabhuku, vashandisi vanoshandisa Excel mumamiriro ezvinyorwa kubva kune ruzivo ruzivo kuronga zvirongwa zvekutevedzera.
Pasinei nehuwandu hwemashoko makuru ekukurudzira VBA muExcel 2010, yeuka kuti mhinduro yakanakisisa yehurukuro haingasanganisi VBA neimwe nzira. Kunyanya kutarisira kune huwandu hwakawanda hwezvimwe zvinhu kunyange pasina VBA, saka kunyange simba rekodha zvichida haisi kuzovaziva vose. Usati wagadzirisa pane chirongwa cheVBA, tarisa rubatsiro uye zvinhu zvepaIndaneti zvakakwana kuti uone kuti hapana nzira iri nyore.
Windows Server 2016 inopa maitiro matsva ekugadzirisa zvinhu uye unyanzvi hunoita kuti kuderedza kushandiswa kwezvinhu zvakasiyana-siyana paunoderedza mari uye kusavhiringidza maitiro ekutungamirira. Izvi zvinosanganisira:
- IP Address Management (IPAM). Izvi zvinopa urongwa hunopa simba rekuzarura, kutungamirira, uye kutarisa kwekombiyuta yePI nzvimbo mukati mehurongwa hwechikwata.
- Hyper-V Network Virtualization. Ichi ndicho chigadzirwa chinorongeka (SDN) urongwa hunoita kuti iwe ushande kugadzirisa zvinetso mumashambadzi ako kuburikidza nekunzwisisa mhando yemashini (VM) IP kerosi kubva kuhutano hwemamiriro ehupenyu hunotarisira uye kutungamirira, semugwagwa umo VM inotarisirwa kubva mumidziyo hwemuviri wevanhu.
- Hyper-V kushandiswa kushandiswa. Izvi zvinopa chigadziro kugadzirisa zvinodiwa kurongeka kwekuchengetedzwa, kuvharwa, kubatsirwa kwehuwandu, uye kugarisana nemasvingo.
- NIC Teaming. Kunze kwegadziriro inoronga sangano rekodhidhi (NIC) inobatanidza isimba rekusimbisa zvisingaiti maviri masangano ekubatanidza muPad ari oga kuti iite seNIC ari oga mukati me Windows.
Iyi MTA Training Training inokubatsira kuronga kweMicrosoft Technology Associate Exam 98-365, uye unogadzira kunzwisisa kwezvinhu izvi: Kuiswa kweSeva, Basa reSeva, Active Directory, Kuchengeta, Server Performance Management, uye Server Maintenance. Iyi dzidzo inokonzera zvinhu zvisingazivikanwi zvinowanikwa muMicrosoft Academic Course Course (MOAC) yeyikuongorora.
Sangano reMicrosoft Technology Associate (MTA) ndiro reMicrosoft rakanyatsoshandiswa pakuongorora zvidzidzo zvinogamuchirwa dzichibvumidza kudzidza kwakakosha kunotanga kutanga kuvaka basa rinoshandiswa nekufambira mberi kweMicrosoft. Iyi purogiramu inopa ndima yakakodzera inoratidza basa remangwana mune zvitsva uye vanotarisira maoko mashomanana-kubatanidzwa kana kugadzirira asi haagamuchiri pakunzwisisa basa.
Ngwarira Server Installation
Ngwarira Server Roles
Nyora Active Directory
Shandisa Server Performance Management
Iyi yekudzidziswa kweMicrosoft & Certification course inopa maitiro ekudzidza zvakakosha kugadzirisa, kutumira, uye kuchengeta Microsoft System Center 2012 Orchestrator. Muchikoro ichi, vanhu vanoziva vanoziva zvinhu zvakasiyana-siyana zveStart Center, uye pashure pacho vanoona kuti Orchestrator 2012 yakavakwa sei uye inotungamirirwa mukati me Systems Systems suite. Saizvozvowo, iyo dzidziso inosanganisira majekiseni emitemo yakatarwa kugadzirisa mamiriro akasiyana, ayo angave akawanikwa mune bhizinesi kuratidza nzvimbo. Pamusoro pezvokwadi, kushamwaridzana kuchava nezvinokosha kuti utarisire Orchestrator 2012 nokuda kwebasa rakawanda rebhizimisi. Dzidzo iyi inobatanidza maoko-pakudzidza kuzarurirwa, saka kunetseka kunogona kushanda pakushandisa bhizimisi mamiriro ezvinhu chaiwo.
Dzidzo iyi yeMicrosoft & Certification inoshandiswa kune veII nyanzvi dzinofanana nezvino dzinodzidza zvakakosha dzidzo yezvigadziro zvavanoda kuita ne Orchestrator 2012 .. Iyi dzidzo ndeyeye nyanzvi dzeTAT dzinoda kunzwisisa zvikamu zvekutanga zvehutano inogona kuda komuteri.
Tsanangura chikamu che Orchestrator 2012 uye yose System System suite
Ipa kuongorora kweIITIL neMoF
Taura uye uronga Orchestrator 2012
Shandura, ruramisa uye rongedza Orchestrator 2012
Gadzirai bhuku rekushandisa robhotization yemaWindows mafomu
Ita mapuraneti anofambira mberi uchishandisa mamiriro ezvinhu anokwanisa
Dzokorora kuiswa kwepakiti yeimwe System System neMicrosoft zvinhu
Ita sarudzo yekukanganisa kuchengetedza uye kugona kuongorora
Dzorera nzira dzekukonzerwa nedambudziko
Dzorera upkeep uye kuongorora mazano muOrchestrator 2012
Sangano re MCSE SQL Server 2014 Data Platform rinobvumira nyanzvi dzeTI kuti dzigadzire uye dzirambe dzichiita basa guru remabhizimusi masikati kana zvigadziriswa. Iyi dzidzo yakakwana kune vatariri vekuchengetedzwa kwemashoko avo vari mubasa rekugadzirira uye kutarisira databases mumatambudziko makuru emabhizimisi. Iyo MCSE chiyeuchidzo mukufambira mberi kwemashoko ichaita kuti nhengo dzikwanise pakugadzirisa zvirongwa uye kujekesa zvivako zvemasvomhu, kusanganisira simba, zvinyorwa uye sevhavha.
Nhengo dzinosarudzwa padzidzo idzi dzichafukidza maonero anotevera mazano aya mune iyi SQL Server 2014 yekugadzirira chirongwa:
Kurondedzera, kugadzira, kuunza, nekuchengetedza zvinyorwa zveMicrosoft zvakagadziriswa
Actualizing uye kuongorora zvinyorwa zvekuchengetedzwa kwemashoko muSQL Server
Kubvunza SQL 2014 Server
Kugadzirisa SQL Server 2014 database mamiriro ezvinhu
Kushandisa ruzivo rwekuparadzira nzvimbo ne SQL server 2014
Kurondedzera mazano eSQL 2014 databases
Dzidzo iyi yeMicrosoft & Certification pamusoro pekupedzisira kweMicrosoft SQL Server inobatsira nyanzvi kuvaka ruzivo mune zvose zvese zvekutarisira zvidzidzo zvekushandurwa kwemashoko uye dhesi dzemamiriro ezvinhu kubudirira.
Bhuku rinokosha revatariri pane iyi ndiyo dhesi uye mabhizinesi ekuziva (BI) nyanzvi dzinoziva nezveSQL Server 2008 uye dzinoda kuvandudza maitiro avo kune SQL Server 2014, uye dzinofara nehukama hweMicrosoft.
Bhuku reMicrosoft Office 365 rekushandiswa kweMabhizimisi rinopa urongwa hunokosha hwokugadzirisa mafungiro uye masangano ehurongwa. Kutumira rubatsiro kunotarirwa kunzvimbo dzinopa ruzivo rwemhando dzakasiyana-siyana kumarudzi akasiyana-siyana ekugadzirisa masangano muhutano hwako.
Heino chirevo chinokurumidza chezvauchawana:
Kutumirwa Maitiro Akawanda. Nyaya iyi inopa hutsika husina kunaka kutora gander pane urongwa uye zvinotarisirwa kuti utumire Office 365. Iine data inobatsira yevatungamiri ve IT, purogiramu yevatungamiri, uye yekuita kunyanya kutungamirira.
Ronga uye Gadzirira mapoka. Izvi zvikamu zvinoratidza zvikamu zvakananga uye maitiro anoshandiswa kugadzirira nekuita zvakakwana eHofisi 365 urongwa. Izvo zvaunoita ndezvezvikamu zvizhinji zvakaratidzwa muchikumbiro chaunotarisa nacho pakati pegadziriro yako. Zvinyorwa zvichitaura muChirongwa chemuganhu chekuita chikamu chekudzoka muGadziriro yegadziriro nemitemo yekuita basa. Urongwa uye Gadzirirai nzvimbo dzine zvinyorwa zvichange zvichinyanya kukanganisa mamwe marudzi eongorudzo nyanzvi munhengo yako.
Enda kune imwe nzvimbo. Iyi nharaunda inoratidza mitsara yekuendesa mabhokisi emakero evarengi ehofisi yeHofisi 365 kuitira kuti unogona kutanga kushandisa Office 365 sechimwe chezvinhu zvakasikwa.
Dzidzo iyi yeMicrosoft & Certification inorayira nzira yekurondedzera uye kuronga inzwi rekushandira mu Microsoft Lync Server 2013 uye Lync Online maitirwo. Iyi dzidzo ichakupa ruzivo uye mano okugadzira nekubata neRync Server 2013 panzvimbo, Lync Online mune gore kana musangano rakakanganiswa. Uyezve, inopa hutano hunodiwa neTI kana nyanzvi dzekukurukurirana kuti ibudise izwi reLync rakagadziriswa. Iyi dzidzo ichakuratidza maitiro ekugadzira Lync Server 2013, uyewo kupa mitemo, maitiro akanaka, nekufungisisa zvichakubatsira kurongedza inzwi rako rekushandira. Dzidzo iyi inobatsira kunyadziswa kunogadzirira Exam 70-337.
Dzidzo iyi yekuMicrosoft & Certification course inotarisirwa kuti vadzidzisi veI Consultants neTerecommunications vanopa mazano vanopedza mwedzi mitatu vasangana nekutaura, kuronga, kutumira, nekuchengetedza zvigadziriswa zvakabatanidza kuwirirana (UC) nekunyoresa kwezwi guru rebhizimisi pamusangano weInternet (VOIP). Kunyengedzera kunofanirwa kuve nekwanisi yekuita kududzirwa kwebhizimisi zvinotarisirwa muunyanzvi hupi neruzivo rwehutano hweUC. Kunyengedzera kunofanira kunge kwakakoshawo neWindows Server 2012 nzira yepamusoro.
Rongedza kugadzirisa kushanda izwi izwi urongwa
Rondedzero uye kuronga kuronga hurumende yeLync 2013
Ronga Lync Server 2013 mazwi ezwi
Actualize crisis crisis administration
Ronga nekugadzirisa Lync Online kana urongwa hwakasanganiswa
Dzidzo yeMicrosoft & Certification pa Exchange Server Administration nekuchengetedza dzichadzidzisa pamusoro pehutungamiri nekugadzirisa shanduro yeComputer Microsoft Exchange Server nenzira iri nyore. Trade 2013 inhanho kubva kuMicrosoft iyo inopa mabhokisi mabhokisi ekugadzirisa, kushambadzira, uye kuburitsa kwezvikwata zvakasiyana-siyana zvekuzivisa kushandiswa nekugadzirisa basa. Nhengo dzichawana deta yakawanda pakugadzirisa, kuronga, nekutarisira MS Exchange hutano huripo, somuenzaniso, post box box, vatengi vanoenda, uye kutakura mashoko. Symantec Mail Security ye MS Exchange inobatanidza Symantec Antivirus kupa mvumo ye email kupikisa spyware, phishing, zvirwere, nezvimwe zvinorwadza nehasha apo ichibvumira maitiro ekutsvaga zvinyorwa pa Exchange Server. Symantec Security inowedzerawo mudziyo weSyantec Protection Suite iyo inopa zvikamu zvehovha kuburikidza nekumisa email iri nehutengo mukati uye inoshumira sekutanga rokuchengetedza kubva panjodzi kana painofanira kuitika kuitika kwekuodzwa mwoyo kwakanyanya uye emafisi ekutumira. Symantec Security inokonzera Symantec AntiSpam, inotungamirirwa neBrightmail innovation, kudzivisa huwandu hwehuwandu hunosvika spam.
Kuungana kunokosha kwevanhu kune iyi ndiyo Nyanzvi yeZvesikirwoti (IT) nyanzvi dziri kuedza kuedza kuronga kuzivisa vatariri. Vamwe vanhu vanogona kutora dzidzo iyi inosanganisira IT generalists uye kubatsira mazano enharaunda yebasa avo vanoda kuziva nezve Exchange Exchange 2013. Misoro inouya mukati mechikoro inovimbiswa kuti ive isina makore anopfuura 3 ane ruzivo rwekushanda muI IT munharaunda-munharaunda yehurongwa hwehurongwa, rubatsiro rwebasa rekushanda, kana sangano rinogadzirisa. Havasi kutarisirwa kuti ichange ichibatanidza nekare Exchange Exchange mafomu Kubatana kwebatsiro kwevanhu kweiyi ndiyo nyanzvi dzinotarisira kutora mutsva 70-341A: Microsoft Exchange Server 2013, Core Solutions, semuenzaniso, kana sekuru chinangwa chezvinodiwa kuti MCSE: Microsoft Exchange Server 2013 certification inotora gwaro iri senyaya yekugadzirisa.
Dzidzo iyi yeMicrosoft & Certification ichakupa dzidzo uye maitiro ekugadzirira, kutumira, kutarisira, kuchengetedza, uye kukurudzira Microsoft Exchange Server 2013. Iyi dzidzo ichakuratidza nzira yekugadzirisa Exchange Server 2013 uye ikupa iwe nedheta raunofanira kuvhara, kuchengetedza, nekuongorora Exchange Server 2013. Iyi dzidzo ichapawo mitemo, tsika dzakanakisisa, nekufungisisa kuchakubatsira iwe kuwedzera kukura nekuderedza zvikanganiso nekuchengetedzwa kwekuchengetedza mu Exchange Server 2013.
Tumira uye utarisire Exchange Server 2013.
Ronga uye sarudza bhasi rebhokisi reMail.
Kutarisa zvikamu zvekubatsira, nhaurirano yeadhesi, uye marenda ekero mu Exchange Server 2013.
Rongedza uye shandisa iyo Client Access server muchikamu che Exchange Server 2013.
Gadzirira nekugadzirisa nekugadzirisa Microsoft Outlook Web App uye zvakasiyana-siyana uchizivisa kushandiswa kweCentent Access
Ngwarira uye utarisire zvakanyanya kupfurikidza maIndaneti Access servers mu Exchange Sever 2013.
Gadzirira kugadzirisa dambudziko kuenzanisa, ita nekusimbisa nekudzoka kwe Exchange Server 2013.
Saronga uye kugadzira shoko rekutakura kune imwe sangano re Exchange Exchange 2013.
Saronga dzimwe nzira dzekuchengeteka kwemashoko, kugadzirisa antivirus mhinduro, uye kurwisa utsinye urongwa hwe spam.
Saronga kubvumirana uye kuchengeteka Exchange Server 2013.
Screen, chengetedza, uye tsvaga Exchange Exchange 2013.
Bhuku rinokosha reyiyi ndiyo Nyanzvi yeIknoloji (IT) nyanzvi dziri kutsvaga kuedza kuronga kuzivisa vatsigiri. Vamwe vanhu vanogona kutora dzidzo iyi inosanganisira IT generalists uye kubatsira mazano enharaunda yebasa avo vanoda kuziva nezve Exchange Exchange 2013. Vatungamiri vanouya muchechi vanofanirwa kunge vasina makore anopfuura 3 vane ruzivo vachishanda muIt field-kazhinji munharaunda yehurongwa hwehurongwa, rubatsiro rwebasa rekushanda, kana sangano rinoronga. Havana kutarisirwa kuti ingadai ichinyatsobatanidzwa neDynamic Exchange yekare.
Iboka rebetsero revatariri veyiyi ndiyo nyanzvi dzinotarisira kutora mutsara 70-341A: Microsoft Exchange Server 2013, Core Solutions, sechimiririro, kana sechikamu chezvinodiwa kuti MCSE: Microsoft Exchange Server 2013 certification ichasvika tora chidzidzo ichi sekuronga zvinhu.